पात्रको खोजी र आता
कृष्ण धरावासी काठमाडौं, १० जेठ
मैले लेखेका अधिकांश आख्यानहरूमा उल्लेखित पात्रहरूको नाम र विवरण यथार्थ हुने भएकाले प्रायः पाठकहरू सोधिरहन्छन्, ‘फलानो पात्रको खबर के छ अचेल ? वा ऊ कता छ ?’ आदि । कतिपय पात्रहरूका बारेमा मलाई पनि चासो भइरहन्छ तर उनीहरूको स्थितिबारे खासै जानकारी हुँदैन ।
त्यसो त आफैँले पनि त्यो घटना र परिवेशबाट टाढिँदै गएपछि उनीहरूसँग भेट हुने सम्भावना न्यून हुनु स्वाभाविक हुन्छ नै । कैयौँ यस्ता पात्रहरू छन्, जोसँग मेरो लेखकीय घनिष्ठता अत्यन्त गहिरो छ । उनीहरू बारम्बार मेरो स्मृतिमा आइरहन्छन् । उनीहरूका बारेमा चासो भइरहन्छ ।
कति पात्रहरू त व्यक्तिगत जीवनमा समेत सम्पर्कमा रहिरहेका हुन्छन् । धेरैजसो लेखनमा पात्रहरूकै प्रभाव मलाई बढी छ । त्यो पात्रको अवस्था देखेपछि घटना र विषयवस्तुको रचना गर्नतिर लाग्छु । कति घटना त पात्रकै जीवनका यथार्थहरू पनि हुन्छन् । पात्रसँगका प्रत्यक्षताहरूले कहिलेकाहीँ सङ्कट पनि पारेका छन् ।
धेरैले सोध्ने गर्छन्, ‘आधा बाटो उपन्यासकी आता कता छन् ?’ मलाई पनि भित्र मनमा लागिरहन्थ्यो, वास्तवमा ऊ कता होली ! झण्डै ३५ वर्षअघिकी मभन्दा ५ वर्ष कान्छी त्यो मेरी सानी साथी अहिले त कति बुढी देखिँदी हो ।
बालककालदेखि नै राम्रो खान, लाउन नपाएकी, स्याहार नपुगेकी त्यो आदिवासी बालिकाको वयस्क जीवन पनि कति नै स्वस्थ्य रह्यो होला र ! त्यसमा पनि कलिलैमा सुत्केरी भइसकेकी थिई त्यो । आतालाई सम्झिनेवित्तिकै इलाम क्याम्पस, चियाबारी, चुरेघाँटी, सिम्फ्रिङ, माइपोखरी सबै आँखाअघि नाँच्न थाल्छन् । बाहुनी बज्यै, कार्की दाइहरू पनि नाच्न थाल्छन् आँखामा ।
सम्झना जति पुरानो हुँदै गयो, त्यसको स्मृति झन् ताजा हुँदो रहेछ । मैले आफैँ पनि आताका बारेमा बेलाबेला चासो राखिबस्थेँ । मलाई उसको किन धेरै माया लाग्थ्यो भने, ऊ मभन्दा ५ वर्ष कान्छी भएर पनि मलाई अर्ति, उपदेश दिन्थी ।
मेरा लागि छुट्टिएका कामहरू गरिदिन्थी र भन्थी, ‘तिमीलाई कुमार बाबुले पढ्न पो पठाएको त दाजु, यहाँ काम गर्न पठा’को हो र ? काम त हामी गरिहाल्छौँ नि ! तिमी धेरै पढेर ठूलो मान्छे हुनु नि !’
म छक्क पर्थें उसका कुराले । मेरी माहिली बहिनी जस्तै लाग्थ्यो मलाई आता । मैले लेखेका कविता, कथाहरू लेखिसकेपछि ठूलो स्वरमा कराएर पढ्ने बानी थियो मेरो । मैले पढिरहँदा ऊ पर दैलोको कुनामा टुक्रुक्क बसेर सुनिरहन्थी र पढिसकेपछि मुसुक्क हाँस्दै भन्थी, ‘यस्ता कुरा कसरी आउँछन् दाजु तिमीलाई ?’
दुई-चार दिन, दुई-चार दिनमा सोध्थी, ‘अचेल केही पढ्दैनौ त दाजु !’
मलाई अचम्म लाग्थ्यो- त्यो केही नपढेकी १३ वर्षकी सन्थाल केटीलाई पनि मेरो लेखाइले तान्न थालेको थियो ।
२०३५ चैतमा गाउँभर रगतमासीको महामारी चल्यो । गाउँले दबाइ, औषधिको भरमा पर्नेहरू निकै जना त्यही बिमारले मरे पनि । अरुण बुढाथोकी दाइको घरमा बस्ने आताकै उमेरकी फ्याङ्गुली कान्छी पनि मरी । घोष गाउँमा ८ जना मरे भन्थे ।
एकाएक म पनि रगतमासीले ढलेँ । म ढलेपछि आता निकै चिन्तित भई । उसले कताकताबाट लालीगुराँसको फूल, पुत्काको मह, कुमालकोठीको माटो, मेलको अमिलो, जसले जे भन्छ, त्यही खोजेर ल्याउन थाली । मन नलाग्दा पनि जबर्जस्ती खुवाउन थाली । मलाई त्यसमा विश्वास नभए पनि, खान मन नभए पनि उसको मन राखिदिन म खाइदिन्थेँ । तर, ती कुनै पनि घरेलु औषधिले मलाई छोएका थिएनन् ।
मिश्र बाजेले पनि केके औषधिहरू ल्याइदिनुभयो । राईनी कान्छी भाउजूले पनि घरेलु औषधि ल्याउनुभयो तर म ठीक भइनँ । ३ दिन क्याम्पस नगएपछि साथीहरू मलाई खोज्दै डेरामा आइपुग्दा म झण्डै अद्र्धबेहोस अवस्थामा थिएँ रे !
आताको सेवा साह्रै अनौठो थियो । त्यति सानी फुच्चीमा पनि अभिभावकीय क्षमता देखा पर्न थालेको थियो । एक पल्ट ऊ बैदार दाइसँग बाझ्दै थिई, ‘आज मेरो यो भान्सामा नपस है बैदार दाइ। ! तिमीले सिनो काढेको छ ।’
बैदार दाइले झण्डै पिटे उसलाई तर ऊ टेरिन । बोलिरही । काली भए पनि ऊ सफा थिई । जस्तै जाडोमा पनि हप्तैपिच्छे धारोमा गएर नुहाउँथी । उसको मलाई मन नपर्ने एउटा बानी थियो- चुर खाने । मेरी आमाकै चुरको ब्यापार थियो तर पनि त्यति कलिलैमा उसले चुर खाएको मलाई मनपर्दैनथ्यो ।
चुर मात्र होइन, ऊ चुरको खरानी पनि जीब्रोमा खसाल्थी र निल्थी । मैले जति कराए पनि, रिसाए पनि चुर खाने बानी भने उसले छाड्न सकिन । हरेक बिहीबार मिश्र बाजेले आताका लागि एक ताउ कागज र ८ आनाको चुर ल्याइदिनै पर्थ्यो, नत्र ऊ मिश्र बाजेसँग चरचरी बाझ्थी र काम नै छाडिदिन्थी ।
तोरीको पिनाको अचार बनाउन मलाई उसैले सिकाएकी हो । सिद्राको अचार साह्रै मीठो पार्थी । बाहुनी बज्यै भएसम्म त हामीलाई अँगेनोभन्दा माथि जाने अनुमति नै थिएन । बज्यै हिँडेपछि त आता नै भान्से लागेकी थिई । कहिलेकाहीँ मिश्र बाजे अनौठो अनुहार पार्दै भन्थे, ‘होइन बाहुन नानी ! आताले पकाएकै खाने गरेको छ ?’
म सजिलै भनिदिन्थेँ, ‘मेरो ब्रतबन्ध भा’को छैन बाजे !’ उनी चुप लाग्थे । सिस्नो टिपेर ल्याउँथी कहिले । सिस्नोले पोलेर सुन्निएको पाखुरा देखाउँदै भन्थी, ‘नफ्याँकी सप्पै खाऊ नि दाजु ! हेर, पाखुरो यस्तो हुने गरी पो टिपेर ल्याएकी छु नि !’
मलाई सिस्नोको साग कहिल्यै मीठो लागेन तर आता रिसाउली भनेर जबर्जस्ती खान्थेँ ।
कार्की दाइले छाडेपछि बैदार दाई काम गर्न बसेका थिए । बैदार दाई खुब गफाडी थिए । जहिले पनि भन्थे- ‘म राणाको पालाको ३६ मौजाको बैदार हुँ ।’
उनी के हुन्, के होइनन्, मैले कहिल्यै खोजिनँ तर ध्यान दिएर उनको कुरा सुनिदिन्थेँ । प्रायः मानिसहरू बैदार दाइका हावा कुरा सुन्न दिक्क मान्थे, म भने बुझ्झकी विद्यार्थीझैँ सुनिदिन्थेँ । उनका कुरा सुनिदिएपछि खुसी हुँदै भन्थे- ‘भाइले अब यी सानातिना काम नगर्नू । आता र म गरिहाल्छौँ । भाइ पढिरहनू ।’
हुन पनि बाहुनी बज्यैले मलाई काममा पेलेको देखेर रिसाएकी आता एक दिन खुट्टा बजार्दै मेरो कोठामा पसेकी थिई । कस्तोकस्तो हान्ने राँगाको जस्तो अनुहार पार्दै भनी- ‘हेर है भट्टराई दाजु, म यी बज्यैलाई कुन दिन भुत्लाई दिन्छु नि !’
उसको रिस देखेर छक्क पर्दै सोधेँ- ‘आज फेरि केमा प¥यो हौ तिमीहरूको ?’
ठिङ्ग मेरो अगाडि उभिएर हात नचाउँदै भनी- ‘त्यो भट्टराईको काम तैँले किन गर्नुप¥यो हँ ! तेरो पोइ हो कि के हो त्यो रे !’
यति भनिसक्दा साँच्चै अहिले नै गएर त्यसले बज्यैलाई जगट्याउँछे जस्ती देखिई । म पनि अलमल्ल भएँ । मनमा नमीठो लाग्यो । रिसरिस उठ्यो भित्रभित्रै । तर, मसिनो स्वरमा भनेँ- ‘त्यसरी झगडा गर्नुहुँदैन त ! तँ सानी छेस्, उल्टै कुटाइ खान्छेस् । उनले जे भने पनि कुरै नसुन्नु क्या त !’
‘त्यस्तो कुरा पनि भन्ने हो त ! तिमी मेरो पोइ हौ त !’ भन्दै ऊ त मैमाथि पो खनिएली जस्ती भई । सँझाउँदै भनेँ- ‘तिनले भन्दैमा के हुन्छ त हौ ! तँ नबोल् न त !’
ऊ फन्किँदै निस्केकी थिई । त्यस दिनदेखि त झन् उसले मलाई कुनै काम गर्न दिइन । बज्यै ठूलाठूला आँखा पारेर आतालाई हेर्थिन् ।
बैदार दाइले खुसी भएर मलाई काम नगर्नू भनेको दिन पनि आता खुसी देखिएकी थिई । बैदार दाई जति फस्र्याइला भए पनि साह्रै फोहोरी थिए । उनी कहिल्यै नुहाउँदैनथे । जीउको मयल पसिना आएका बेला हातैले माडेर लुँडालुँडा बनाएर टकटक्याउँथे ।
एक दिन फेरि आता र बैदार दाइको भनाभन हुँदै रहेछ । छेउमा गएर मैले सोधेँ- ‘किन बाझेकी आता आफूभन्दा ठूलासँग ?’
ऊ फेरि औँला नचाउँदै बोल्न थाली- ‘यस्तो गह्नाउने किनिमा नहाल्नु दालमा, भट्टराई दाजुले खाँदैन भनेको नटेरी हाले । आज तिमी केसँग खान्छौ अब भात ?’
म अलमल्ल परेँ । मन कस्तोकस्तो भयो । यो परदेशमा यो फुच्ची केटी मेरी आमा भएकी थिई । मेरा सानासाना कुरा याद गर्थी । निकै पहिला उसले सिद्रामा झोल हालेका बेला गह्नायो भनेर म भातै नखाई उठेको थिएँ । त्यो दिन ऊ निकै सुर्ताएकी थिई । सिद्रा त मन नपराउने मैले किनिमा कसरी मनपराउँला भनेर ऊ चिन्तित भएकी रहिछ ।
जति सम्झिँदै गयो, मलाई आता एउटा विशाल बिम्ब जस्ती हुन्छे । आधा बाटो पढेका कति पाठकले मलाई जिस्क्याएका पनि छन्- ‘आतासँग तपाईंको प्रेम परेको थियो हो ?’ भनेर ।
प्रेम त त्यो उमेरमा के पर्नु तर मलाई उसको खुब माया लाग्थ्यो । उसले मलाई गरेको सेवाका कारणले त होला नि !
मभन्दा अघि नै ऊ सिन्फ्रिङबाट मधेस झरेकी थिई । त्यसपछिको कथा पनि मैले आधाबाटोमै लेखेको छु ।
तर, यसपालि मलाई मनमा कतै चस्स दुख्यो जब केशवकुमार बुढाथोकी दाइले भन्नुभयो- ‘आता त सिक्किमतिर गएकी थिई रे, उतै मरिछे ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १०, २०७७, १६:१४:००
मेसिनको दासयात्रातिर हामी पनि
लोकतन्त्र : भ्रमको गिलास, सोडाको फिँज